Hab nololeedka fadhiga: waa maxay waqtiga ugu wanaagsan ee maalintii la jimicsado? | Ragga Stylish
Samee jimicsi joogto ah iyo maalin kasta waa mid ka mid ah howlaha ugu caafimaadka badan. Waxay kuxirantahay shaqadaada, yoolalkaaga iyo jadwalkaaga, waxaad ubaahantahay inaad doorato waqtiga ugufiican ee jimicsi.
Falanqeyntan waa inaad ogaataa laxanka noolaha (waxa aan ugu yeeri karno saacadda gudaha), Isagu waa kan kantaroola xuduudaha jimicsiga.
1 Talooyin ku saabsan doorashada xilliga jimicsiga
2 Sababaha doorashada waqtiga saxda ah ee jimicsiga
Talooyin ku saabsan doorashada xilliga jimicsiga
Aroortii, heer-kulka jidhkeennu wuxuu marayaa heerkiisii ​​ugu hooseeyay. Waqtigaas, tamarteenna iyo socodka dhiiggu wuu yaraaday. Cawaaqibta waxay noqon kartaa in qabowgu uu kordhin karo halista dhaawaca.
Haddii aan tixgelinno heerkulka ugu wanaagsan iyo heerka ugu sarreeya ee hormoonnada jidhkeenna, waqtiga ugu fiican ee la jimicsado wuxuu noqon karaa 18 pm.
Ku saabsan fadhiyada tababarka subaxa, kuwani waxay wax u dhimayaan nidaamka difaaca jirka. Tani waxay kordhin doontaa halista fayraska iyo infekshannada bakteeriyada.
Inta udhaxeysa 16-ta galabnimo iyo 17-ta galabnimo, khubaradu waxay yiraahdaan sambabaha ayaa sifiican u shaqeeya. Tan, muruqyada waxay leeyihiin dabacsanaan weyn, jawaab celin iyo xoog badan.
Tababbarka waxa ugu horreeya ee maalintii wuxuu abuuraa is-waafajin dheeri ah wuxuuna door bidaa nasashada. Dhinaca kale, kuleyl badan ayaa loo baahan yahay, sababtoo ah saacadaha aan firfircooneyn inta lagu jiro hurdada.
Sababaha doorashada waqtiga saxda ah ee jimicsiga
Adkaysiga jimicsiga jirka, taas oo ah awoodda bayooloji ee ay tahay inaan ku dadaalno dadaallada.
Kalori gubasho. Sidaan aragnay galabnimada, dheef-shiid kiimikaadkeena waa hooseeya waxaana jira duruufo wanaagsan oo lagu dhimo miisaanka.
Cunsurka kale ee muhiimka ah waa heerkulka deegaanka. Way ka qabowsan tahay, kaloriinta badan ee aad gubi karto.
Horumarinta murqaha, hormoonnada ayaa ah xulafada ugu fiican. Tan awgeed, tababarka waa in la sameeyaa waxa ugu horeeya subaxa ama dhamaadka galabtii.
Ilaha Sawirka: Fikradaha Caafimaadka / Farmasana
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Waqtiga ugu fiican ee jimicsiga
Maalinta Kirismaska: Sida loo helo muuqaal caadi ah oo miyir-qab leh